ကလေးအဖေတစ်ယောက် ဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြခဲ့တဲ့ စိုးရန်အောင် – Suehninsi
ကလေးအဖေတစ်ယောက် ဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြခဲ့တဲ့ စိုးရန်အောင်
Sue | June 15, 2020 | ရသစုံ | No Comments
သက်သခင်ကတော့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရပြီလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် စိုးရန်အောင်က ပြောပါတယ်။ သူကတော့ ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့မှာမို့ ဝမ်းသာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ” Change Of life; မကြာခဏပေါ့ဗျာ.. ပွဲတွေမှာ မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့တိုင်း ကျွန်တော်တို့လင်မယားကို“ကလေးမယူသေးဘူးလား ? ၊ ဘာလို့လဲ မယူတာလား ? “ တဲ့လေ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆွေမျိုးများနဲ့ဆုံရင်လည်း
အဲဒီအတိုင်းပဲမေးကြလေတော့ “ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ကြိုးစားပါ့မယ်” ဆိုပြီးဖြေခဲ့မိတာပေါ့ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ခပ်ရှက်ရှက်ရယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အခုအဖြေပြောင်းပြီးဖြေပေးပါ့မယ်။ မကြာခင် ကျွန်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတော့မယ်ဗျာ!!! ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိဘတွေ အဘိုးအဘွားစာရင်းဝင်လို့ အကိုတွေ ဘကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ …!!! မိန်းမရေ ကျေးဇူးပါကွာ” ဆိုပြီးတော့ ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့ ည ၇ နာရီကျော်က
သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ စိုးရန်အောင်နဲ့ သက်သခင် တို့ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၊ မေလ ၆ ရက်နေ့ မှာ Melia Hotel မှာ မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၉ လပိုင်း ၁၁ ရက်နေ့မှာ စေ့စပ်ပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့က
အောင်မြေဘုံသာ သျှမ်းကျောင်း မှာ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူပြုခဲ့ကြတာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး တစ်ခု အနေနဲ့ My’s Pizza ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးလည်း ဖွင့်လှစ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ စိုးရန်အောင် နဲ့ သက်သခင်တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း အနုပညာလောကထဲကို မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ သက်သခင်ကိုတော့ ပရိသတ်တွေကို မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်အားပေးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရန်အောင်ကိုတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေကနေ တဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိလာခဲ့တာပါ။
သကျသခငျကတော့ ကိုယျဝနျလှယျထားရပွီလို့ ခငျပှနျးဖွဈသူ သရုပျဆောငျ စိုးရနျအောငျက ပွောပါတယျ။ သူကတော့ ဖခငျတဈယောကျဖွဈတော့မှာမို့ ဝမျးသာနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ” Change Of life; မကွာခဏပေါ့ဗြာ.. ပှဲတှမှော မီဒီယာတှနေဲ့တှတေို့ငျး ကြှနျတျောတို့လငျမယားကို“ကလေးမယူသေးဘူးလား ? ၊ ဘာလို့လဲ မယူတာလား ? “ တဲ့လေ။ မိတျဆှသေူငယျခငျြးဆှမြေိုးမြားနဲ့ဆုံရငျလညျး
အဲဒီအတိုငျးပဲမေးကွလတေော့ “ဟုတျကဲ့ ကြှနျတျောကွိုးစားပါ့မယျ” ဆိုပွီးဖွခေဲ့မိတာပေါ့ ပွနျတှေးကွညျ့တော့ ခပျရှကျရှကျရယျ။ ဟုတျကဲ့ အခုအဖွပွေောငျးပွီးဖွပေေးပါ့မယျ။ မကွာခငျ ကြှနျတျောဖခငျဖွဈပါတော့မယျဗြာ!!! ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မိဘတှေ အဘိုးအဘှားစာရငျးဝငျလို့ အကိုတှေ ဘကွီးဖွဈပွီပေါ့ဗြာ …!!! မိနျးမရေ ကြေးဇူးပါကှာ” ဆိုပွီးတော့ ဇှနျလ (၁၄) ရကျနေ့ ည ၇ နာရီကြျောက
သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ ဇနီးမောငျနှံကို ခဈြတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ဝမျးသာမဆုံးဖွဈလို့နပေါတယျ။ စိုးရနျအောငျနဲ့ သကျသခငျ တို့ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ၊ မလေ ၆ ရကျနေ့ မှာ Melia Hotel မှာ မင်ျဂလာအခမျးအနား ကငျြးပခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ ၂၀၁၇ ခုနှဈ ၉ လပိုငျး ၁၁ ရကျနမှေ့ာ စစေ့ပျပှဲကငျြးပခဲ့တာဖွဈပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဧပွီလ (၆) ရကျနကေ့
အောငျမွဘေုံသာ သြှမျးကြောငျး မှာ မင်ျဂလာဦးဆှမျးကြှေးအလှူပွုခဲ့ကွတာပါ။ လကျရှိမှာတော့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေး တဈခု အနနေဲ့ My’s Pizza ဆိုတဲ့ ဆိုငျလေးလညျး ဖှငျ့လှဈထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ စိုးရနျအောငျ နဲ့ သကျသခငျတို့ ဇနီးမောငျနှံဟာ အနုပညာရှငျတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ နှဈယောကျစလုံးကလညျး အနုပညာလောကထဲကို မျောဒယျလျ တဈယောကျအနနေဲ့ စတငျဝငျရောကျလာခဲ့တာပါ။ သကျသခငျကိုတော့ ပရိသတျတှကေို မျောဒယျလျ တဈယောကျအနနေဲ့ စတငျအားပေးလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ စိုးရနျအောငျကိုတော့ ဗီဒီယို ဇာတျကားတှကေနေ တဆငျ့ ပရိသတျတှေ စတငျသိရှိလာခဲ့တာပါ။
သားဖြစ်သူကို ပူပူနွေးနွေးဆုံးရှုံးထားရလို့ ခံစားနေရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ဟာသလေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကို ကုစားနေရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတာကြောင့် ပီတိဖြစ်နေရတဲ့ ကိုပေါက်
ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ အရာကို တောင်းဆိုလိုက်တာနဲ့ သွားရောက် လှူဒါန်းပေးတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကို ကျေးဇူးတင်နေတဲ့ အေးသီတာ
တောင်ကြီးမှာ အဆောက်အဦးနဲ့ မြေနေရာ လှူတဲ့သူပေါ်လာလို့ ဂေဟာအသစ် ထပ်ဖွင့်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ